warkii.com » Kajol: “Shah Rukh iyo Ajay ma ahan saaxiibbo…”
Kajol: “Shah Rukh iyo Ajay ma ahan saaxiibbo…”
Waxaa sanooyin badan dood aan dhammaanin noqotay sheekada ah in xiriir is naceyb ah uu ka dhexeeyo Shah Rukh Khan iyo Ajay Devgan kaasoo ka billawday atariishada u dhaxda Ajay ee Kajol taasoo saaxiib dhow la ah Shah Rukh.
Haddii aad qof isu dhowdihiin, taas macnaheedu ma ahan in lammaanahaagana uu qofkaas u dhowaado ayay ahayd sharraxaddii ay bixisay Kajol markii ay ka hadleysay isu dhowaanshaha iyada King Khan iyo saameeynta uu ku leedahay Seygeeda.
Marwalba oo Kajol la weydiiyo inay isku wanaagsan yihiin Seygeeda iyo saaxiibkeeda ugu dhow, waxay si cad u sheegeysay inaysan ahayn saaxiibbo.
“Haddii labada qof aysan saaxiibbo ahayn, taas micnaheedu ma ahan inay cadaw isku yihiin, hore ayaanna u sheegay” ayay tiri Kajol.
Waxaa intaas ay ku dartay xiddigtan in labadooday aysan xaflado wadaagin, sawirrana wada galin, taasna aysan ka dhignayn in labadooda uu naceyb ka dhexeeyo.
“Shah Rukh waa saaxiibkeyga ugu fiican, waxaanna mar walba caddeynayay in saaxiibbadeyda ay aniga igu kooban yihiin, aniguna marnaba Ajay kuma qasbin inuu saaxiibbadeyda saaxiib la noqdo, isagana waa ila mid” ayay hadalkeeda ku dartay xaaska Ajay Devgan.
Kajol ayaa sidoo kale waxay sheegtay in labada xiddig ay dhowaan ku kulmeen dalka Bulgaria, sidoo kalena horraan ay ugu kulmeen guriga ay iyadu iyo seygeeda deggan yihiin, iyadoo sheekada kusoo gabagabeysay inaysan Ajay iyo Shah Rukh saaxiibbo ahayn, cadawtooyana aysan ka dhexeyn.